Qalabka Marmarka-Jadwalka & Farshaxanka - Morningstar Stone Co., Ltd.
Tallaabadani waa mid aasaasi ah oo muhiim u ah dhammaan tallaabooyinka la raacayo. Baloogyada dhagaxa ah ee dhagaxa ah iyo dhagxaanta si ballaadhan ayaa loogu faafiyey alaab ceeriin ah oo diyaar u ah ka shaqaynta. Xulashada agabku waxay u baahan tahay aqoon nidaamsan oo ku saabsan astaamaha walxaha iyo dalab iyo maskax diyaar u ah barashada qalab kasta oo cusub. Baadhitaan faahfaahsan oo ku saabsan alaabta ceeriin ah waxay ku lug leedahay: duubista cabbirka iyo hubinta muuqaalka muuqaalka. Kaliya nidaamka xulashada ayaa si sax ah loo qabtay, badeecada ugu dambeysa waxay soo bandhigi kartaa bilicdeeda iyo qiimaha dalabka. Kooxdayada wax soo iibinta, oo raacaya dhaqanka shirkadda soo saarista oo keliya alaab tayo leh, ayaa aad ugu xeel dheer helitaanka iyo soo iibsashada qalab tayo sare leh. ▼